Fiilmiin Ajaa'iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Bashannana Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf
Fiilmiin Afaan Oromoo Ajaa’iba jedhamu Ebla 4 magaalaa Chikaagootti ummataaf dhihaata, akka ibsa daayireektarichaa Saamson Maarqoositti.
Akka Saamson VOA Afaan Oromootti himetti qabiyyeen fiilmii Ajaa’ibaa jireenya namoota biyya oromaa jiraatan kanniin umriin wolhinginne garuu wolfuudhanii woliin jiraatu irratti xiyyeeffata. Fiilmiin kuni bu’i bayii maatii jidduu dhimma jaalalaan wolqabatee jiru irratti kan fuulleffateedha.
Fiilmiin kuni maqaa obsee jedhuun kan eegale. Garuu, gara boodaatti moggaasni maqaa fiilmichaa gara isa Ajaa’iba jedhutti geeddaramuusaa dubbata Saamson. Akka ibsa Daayireektera fiilmii kanaatti, fiilmichi senaa gaddaafi gammachuun kan guutameedha.
Saamsonifi fiilmiin kuni isa jalqabaa miti. Daayireekteriin kuni kana duras fiilmii Agartuu Barraaqaa jedhu hojjatee ummata isaa biraan gayee ture.
Fiilmiin kuni magaalaa Chikaagoon alatti magaalotii Ameerikaa Kaabaa heddu keessatti kan daawwannaa ummataaf dhihaatu ta’uu isaati kan dubbatamu.
Woggoota lamaan kana tattaafiin fiilmii Afaan Oromoon guddisuuf godhamu cimaa kan dhufe fakkaata.
Previous articleFilannoo Naayjeeriyaa: Muhaammaduu Buhaarii sagalee ummataan perezidaantii biyyattii angoo irraa buusan
Next articleHaleellaa Yunivarsiitii Keeniyaa irra Al Shabaab geesseen 147 du’anii 70 ol madoo ta’an